खोज इञ्जिन अनुकूलन: सजिलो वा गाह्रो? | Martech Zone
खोज इञ्जिन अनुकूलन: सजिलो वा गाह्रो?
सोमबार, मार्च 30, 2009 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
वेब साइटमा वेब साइटलाई कसरी अनुकूलित गर्ने भन्ने बारे बाहिर जानकारी को एक टन छ। दुर्भाग्यवस, .99.9 XNUMX..XNUMX% वेबसाइटहरूमा अझै पनि कुनै अप्टिमाइजेसनको कमी छ। म आफूलाई एसईओ विशेषज्ञको रूपमा वर्गीकृत गर्दिन, जबकि म विश्वास गर्दछु मसँग छ तत्वहरूको पूर्ण समझ 'रेड कार्पेटलाई रोल आउट गर्दै' खोजी ईन्जिनहरूका लागि संलग्न।
जब मेरा साथीहरूले सल्लाह माग्छन्, म तिनीहरूलाई आधारभूत कुरा दिन्छु:
तपाइँको साइट रेजिष्टर गर्नुहोस् गुगल खोज कन्सोल यो क्रमबद्ध भइरहेको छ र मुद्दाहरू छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न। यसले तपाईंले गर्नु पर्ने सुधारहरूलाई औंल्याउँछ - जस्तै साइटम्याप र रोबोट फाइलहरूको उपयोग।
अनुसन्धान keyprasses ती खोजीकर्ताहरूले तपाइँ प्रदान गर्नुभएको उत्पादनहरू र सेवाहरू हेर्न प्रयोग गर्दछन्। एउटा उदाहरण एक साथी हो जसले टेक्स्ट मेसेजिंग कम्पनी चलाउँछ ... तर सर्तको अभाव छ मोबाइल मार्केटिङ आफ्नो साइट को सामग्री मा। यो एक अपवाद होईन - यो धेरै सामान्य छ!
कुञ्जी शब्दहरू कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्दै ... डोमेन नामबाट, URL or पोस्ट स्लग, पृष्ठ शीर्षक, h1 ट्याग, उपशीर्षकहरू, बोल्ड पाठ, आदि। साथै सामग्रीको भित्र खोजशब्द बहुविध प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंको साइटमा फर्किने किवर्ड-समृद्ध लिंकहरूलाई पहिचान गर्दा ती शव्दहरूको लागि तपाईंको साइटको स्तरलाई नाटकीय रूपमा बढाउँदछ। एक महान ब्याकलिink्क रणनीति मात्र कुराकानी र अन्य उद्योग ब्लग भर टिप्पणीहरु मा भाग लिन सकिन्छ।
सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो केवल उत्कृष्ट सामग्री लेख्ने र यसलाई राम्रोसँग लेख्ने। यदि तपाईं टिकट खरीद गर्नुहुन्न भने तपाईं राफललाई जित्न सक्नुहुन्न। उही समान खोज इञ्जिनहरूको लागि जान्छ - तपाईं खोजी ईन्जिन परिणामको लागि श्रेणी गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईंसँग कुनै सामग्री छैन जुन खोजीसँग सान्दर्भिक छ। अधिक टिकटहरू खरीद गर्नुहोस् र तपाईंको अवसरमा नाटकीय रूपमा वृद्धि भयो। त्यो गणित एकदम सरल छ।
केही उद्योग र कीवर्डहरू यति प्रतिस्पर्धी छन् कि यो आवश्यक छ धेरै लगानी - विशेषज्ञता, समय, सामग्री र ब्याकलिinking्क रणनीतिमा। यदि तपाईं अधिक गहन टिन्किink् चाहनुहुन्छ भने, म मोजमा सामेल हुन सुझाव दिन्छु। कम से कम, Moz को माध्यम बाट पढ्नुहोस् खोज इञ्जिन श्रेणीकरण कारकहरू साधारण पृष्ठ एलिमेन्टहरूले तपाईंको खोजी ईन्जिन स्तर निर्धारणमा पार्न सक्ने प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न। त्यहाँ अझै छन् SEO लेखहरू त्यहाँ पनि!
AT&T: Next AIG?
स्थानीय खोजी बढ्दैछ, के तपाईं नक्सामा पनि हुनुहुन्छ?
मार्स 31, 2009 मा 12: 21 एएम
ठोस सुझावहरू। मलाई SEO धेरै भ्रामक लाग्छ र यसले मलाई कष्ट दिन्छ किनभने मलाई थाहा छ यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। म बिस्तारै सिक्दै छु र यसमा राम्रो हुँदैछु। तर मैले फेला पारेको एउटा कुरा यो हो कि मलाई थाहा छ कि मेरो समग्र एसईओ सायद धेरै खराब छ सामग्री बाहिर राख्नुले धेरै मद्दत गर्दछ।
आफ्नो कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेर प्रायः लेख्नुहोस्। यसले समय लिनेछ तर यो गुगलको लागि उत्कृष्ट छ।
अप्रिल 1, 2009 मा 2: 56 एएम
मलाई लाग्छ कि तपाईंले SEO मा विचार गर्न आवश्यक सबै प्रमुख विषयहरू कभर गर्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् र एसईओ विशेषज्ञहरू अझै पनि यस विषयमा कुनै जानकारी छैन। म उपयुक्त कुञ्जी शव्द छनोटमा गुगल एडवर्ड्स बाह्य कीवर्ड उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु।
अप्रिल 1, 2009 मा 4: 12 PM
Seo जटिल छ, यद्यपि यदि तपाइँको साइट वैध छ र तपाइँ सधैं प्रासंगिकता को बारे मा सोच्नुहुन्छ, यो वास्तव मा काम गर्दछ। यो हेर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ (अंक वा गुगल वेमास्टर उपकरणहरू मार्फत) मानिसहरूले वास्तवमा के खोजिरहेका छन्। म छक्क परेको छु कि कतिपय मानिसहरूले आफ्नो खोजमा कस्ता शब्दहरू राख्छन्।
बाहिर निस्कन खोजीहरू हेर्दै र चीजहरू हटाउने व्यक्तिहरूलाई तपाइँको साइटमा ल्याउनु आवश्यक छैन जो तपाइँको सान्दर्भिकता बढाउने एक राम्रो तरिका हो ...
यो जस्तै ब्लग मा आफ्नो विचार राख्नु पनि एक राम्रो तरिका हो!
जुन 28, 2011 मा 7: 33 PM
यदि तपाईंले यो पहिले सोध्नु भयो भने, म खुशीसाथ यसको जवाफ दिन्छु हो तर अब यो धेरै गुगल उपकरणहरूको कारण होइन जसले वेबसाइटको प्रत्येक लिङ्कलाई फिल्टर गर्दछ जुन खोज इन्जिनमा फेला पार्न सकिन्छ र गुगलको अपडेटको कारणले पनि। एसईओ आजकल यति कडा भएको छ कि एसईओ विशेषज्ञहरु लाई अधिक संसाधन र मुश्किल बनाउँछ, यो पनि राम्रो प्रभाव हो।